Nagu Saabsan - Qalabka Madadaalada Weyn ee Co., Ltd.
Waxaan ku dadaalnaa sidii aan noloshaada uga dhigi lahayn mid xiiso leh
Qalabka Madadaalada Weyn ee Co., Ltd.
Qalabka Madadaalada Weyn ee Co., Ltd. (GFUN) wuxuu ku yaal Nantong City, Gobolka Jiangsu, waxaan leenahay 10 sano oo waayo-aragnimo ah soosaarka qalabka madadaalada. Shirkadda waxay ku takhasustay soo-saarista qalabka madadaalada aan awoodda lahayn, qalabka madaddaalada biyaha, qalabka madaddaalada biyaha, qalabka madaddaalada carruurta, qalabka madaddaalada carruurta ee carruurta, qalabka madaddaalada carruurta ee bannaanka, qalabka madaddaalada bannaanka iyo qalabka madaddaalada loo habeeyay. Waxaan nahay shirkad qalabka jimicsiga oo dhameystiran, oo macaamiisha siineysa cilmi baaris iyo horumarin, qaabeyn, soosaarid, iibin, rakibaad, adeeg iyo adeegyo loo habeeyey.
GFUN had iyo jeer waxay u hogaansan tahay suuqa waxayna rajeyneysaa inay daboosho baahiyaha macaamiisheeda. Tusaalooyinka wax soo saarka waxaa ka mid ah jannada carruurta, qalcad adag, qalabka ballaarinta gudaha, qalabka xargaha baarista xargaha shabakadaha, isugeynta isugeynta, iyo qalabka horumarinta jireed ee jardiinooyinka mawduuca. Qalabka jannada, qalabka jimicsiga dibedda, baagaga biyaha, kuraasta firaaqada ee bannaanka, qashinka qashinka, sariiraha badbaadada, badiyaa guryaha, xannaanooyinka, xaafadaha, jardiinooyinka, hoteelada, dalxiisyada dalxiisyada, jardiinooyinka biyaha iyo jiidashada muuqaallo kala duwan. Shirkaddeenu waxay ku buuxin kartaa tas-hiilaad kala duwan oo madadaalo ah oo alaabadayada ah ayaa si guul leh loogu dhoofiyay in ka badan 20 dal iyo gobollada Yurub, Ruushka, Bariga Dhexe, Koonfur-Aasiya iyo Afrika. Waxaan si aad ah u aamminsan nahay oo u amaaneynaa macaamiisheena, iyo silsiladaha taageeraya ee la xiriira taageerada silsiladaha ayaa ah kuwa ugu tayada sareeya.
Daacadnimada, xoogga iyo tayada wax soo saarka ee GFUN waxaa aqoonsaday wershaduhu, asxaabta ka kala socota dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha ayaa lagu soo dhaweynayaa inay nagala xaajoogaan ganacsiga.
☆. 10 sano soo saar khibrad ah warshadaha qalabka madadaalada.
☆. Daraasiin kiisas guul ah.
☆. Kooxda xirfadda leh waxay macaamiisha siisaa taageero farsamo.
☆. Waxaan ku siin karnaa qaabeynta macaamiisheena qaab bilaash ah.
☆. Dhammaan waxyaabaha agabkeenna wata waa bay'ad ilaalinaysa iyo dhammaan qalabkeenna waxay ka gudbeen shahaadada CE.
☆. Shaqaalaheenna farsamada waxay u kacaan inay ka caawiyaan macaamiisha sidii ay u dhisi lahaayeen rakibaadda adduunka oo dhan.
Waa maxay sababta loo Doorto GFUN?
Ku saabsan tikniyoolajiyadda
Ku saabsan sharaf
OEM & ODM waa la aqbali karaa
Shirkadda waxaa ka go'an soo saarista qalabka wax soo saarka ee ugu horumarsan iyo tikniyoolajiyada waxsoosaarka, kaliya agabka ugu tayada sareeya adduunka ee soosaarka alaabada, si tayada qalabka isboortiga loo hagaajiyo.
Sanado badan shirkadaheena ayaa si isdaba joog ah u heshay sharaf qaran, heer gobol iyo degmo warshadaha, Soo jiidashada qalabka garoonku waa mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican warshadaha adduunka oo dhan kuna shaqeeya heerarka ugu sareeya ee suurogalka ah.
Waxaan leenahay 10 sano oo waayo-aragnimo ah soo saarista qalabka madadaalada, dhammaan waxyaabaha alaabadayada ka mid ah waa ilaalinta deegaanka iyo qalabkeenna wuxuu ka gudbay shahaadada CE, 900 shahaado heer qaran oo heer caalami ah iyo shahaadada nidaamka ilaalinta deegaanka ee caalamiga ah iyo shahaadada caalamiga ah ee caafimaadka OHSAS.
Cabirro gaar ah iyo qaabab ayaa la heli karaa. Ku soo dhowow inaad nala wadaagto fikirkaaga, aan ka wada shaqeyno sidii aan nolosha uga dhigi laheyn mid hal abuur leh.
Noocyada wanaagsan waxaa taageera dhaqanka shirkadaha. Waxaan si buuxda u fahamsanahay in kaliya iyada oo loo maro saameyn joogto ah, dhexgalka iyo is-dhexgalka ayaa abuuri kara dhaqan shirkadeed. Muddo sanado ah, horumarka shirkadda waxaa taageeray qiyamkeeda asaasiga ah-- daacadnimada, hal-abuurka, mas'uuliyadda, iskaashiga.
Shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa mabaadi'da dadku ku jihaysan yahay, hawlgal daacad ah, tayada marka hore, iyo qanacsanaanta macaamiisha.
Faa'iidada tartan ee shirkadeena waa ruux noocan oo kale ah, waxaan ku qaadeynaa tilaabo kasta oo leh aragti adag.
Hal-abuurnimadu waa nuxurka dhaqanka kooxdeena.
Hal-abuurnimadu waxay keentaa horumar, waxay keentaa xoog, Wax kasta waxay ka yimaadaan hal-abuurnimo.
Shaqaalaheena waxay ku hal-abuuraan fikradaha, farsamooyinka, teknolojiyadda iyo maamulka.
Shirkaddayadu marwalba way firfircoon tahay inay la qabato isbeddelada ku yimaadda istiraatiijiyadda iyo bay'adda una diyaariso fursadaha soo baxaya.
Mas'uuliyaddu waxay siisaa adkeysi.
Kooxdayadu waxay leedahay dareen xoogan oo masuuliyadeed iyo himilo ah macaamiisha iyo bulshada.
Awoodda mas'uuliyaddani waa mid aan la arki karin, laakiin waa la dareemi karaa.
Awood u leh horumarka shirkadeena.
Wadashaqeyntu waa isha horumarka, abuuritaanka xaalad guul-wada jir ah ayaa loo arkaa inay tahay ujeedo muhiim u ah horumarka shirkada. Iyada oo loo marayo iskaashi wax ku ool ah iimaan wanaagsan, waxaan raadineynaa inaan isku darno kheyraadka isla markaana aan is waafajinno midba midka kale si xirfadlayaashu si buuxda ugu ciyaaraan aqoontooda.
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabadayada, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto si aad ugala taliso